Chen ကို EXO က နှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ သတင်းစာ ကြေညာတွေထည့်ဖို့ ငွေကြေးစုဆောင်းနေတဲ့ “EXO-L ACE” | News Bar Myanmar
Chen ကို EXO က နှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ သတင်းစာ ကြေညာတွေထည့်ဖို့ ငွေကြေးစုဆောင်းနေတဲ့ “EXO-L ACE”
“EXO-L ACE” ဟာ Chen ကို EXO ကနှုတ်ထွက်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ သတင်းစာ ကြေညာတွေ ထည့်ဖို့ ငွေကြေးစုဆောင်းနေပါတယ်တဲ့။ EXOအဖွဲ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေထဲက တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့ “EXO-L ACE Alliance” ဟာ Chen ရဲ့ လက်ထပ်တဲ့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းတည်းက Chen ကို EXO ကနှုတ်ထွက်ဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေခဲ့တာပါ။
Chen ရဲ့ မွေးရပ်မြေမှာ ကြေညာစာ Campaign တွေလုပ်ဖို့ ပယ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ခုလို သတင်းစာကြေညာတွေ ထည့်ဖို့ ငွေကြေးစုဆောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ “EXO-L ACE ” က သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ…
“ငါတို့ မီဒီယာကြီးကြီးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး သူ့ကို နှုတ်ထွက်အောင် ဖိအားပေးဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ သတင်းစာကြေညာပဲ။ သတင်းစာကြေညာမှု သူ့ကို နှုတ်ထွက်ဖို့ တောင်းဆိုတာတွေ ပါမယ်။
ဒီကိစ္စကို ဇွန်လကုန်လောက်မှာ လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထပ်ပြီး ကိုရီးယားဝမ် သိန်း ၃၀ ( #မြန်မာကျပ် သိန်း ၄၀ ခန့်) လိုအပ်မယ်” လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒီလို “EXO-L ACE” ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဘယ်လို ထင်ကြလဲ?
(Zawgyi) Chen ကို EXO က ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ သတင္းစာ ေၾကညာေတြထည့္ဖို႔ ေငြေၾကးစုေဆာင္းေနတဲ့ “EXO-L ACE”
“EXO-L ACE” ဟာ Chen ကို EXO ကႏႈတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ သတင္းစာ ေၾကညာေတြ ထည့္ဖို႔ ေငြေၾကးစုေဆာင္းေနပါတယ္တဲ့။ EXOအဖြဲ႕ရဲ့ ပရိသတ္ေတြထဲက တစိတ္တပိုင္းျဖစ္တဲ့ “EXO-L ACE Alliance” ဟာ Chen ရဲ့ လက္ထပ္တဲ့သတင္းထြက္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္းတည္းက Chen ကို EXO ကႏႈတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေနခဲ့တာပါ။
Chen ရဲ့ ေမြးရပ္ေျမမွာ ေၾကညာစာ Campaign ေတြလုပ္ဖို႔ ပယ္ခ်ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ခုလို သတင္းစာေၾကညာေတြ ထည့္ဖို႔ ေငြေၾကးစုေဆာင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ “EXO-L ACE ” က သူတို႔ရဲ့ လူမႈကြန္ယက္မွာ…
“ငါတို႔ မီဒီယာႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သူ႔ကို ႏႈတ္ထြက္ေအာင္ ဖိအားေပးဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ အထိေရာက္ဆုံးနဲ႔ အလႊမ္းမိုးနိုင္ဆုံး နည္းလမ္းကေတာ့ သတင္းစာေၾကညာပဲ။ သတင္းစာေၾကညာမႈ သူ႔ကို ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြ ပါမယ္။
ဒီကိစၥကို ဇြန္လကုန္ေလာက္မွာ လုပ္နိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထပ္ၿပီး ကိုရီးယားဝမ္ သိန္း ၃၀ ( #ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၄၀ ခန႔္) လိုအပ္မယ္” လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီလို “EXO-L ACE” ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ဘယ္လို ထင္ၾကလဲ?
Next ယခုလက်ရှိ တွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့ Idol အတွဲ ၃ တွဲ »
Previous « SM, JYP နဲ့ YG တို့ ဘယ်လိုလူတွေကို အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရွေးတတ်ကြတာလဲ... ?